ခရူးရှူး | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ခရူးရှူး
Updated: 2017-04-06 16:23
ASO Farm Land အပန်းဖြေ စိုက်ပျိုး ကွင်း ရွာ ( အာစိုး ၊ခရူးရှူး ၊ ဂျပန် )
အာစိုး ဒေသ က လယ်ယာ ရွာလေး အပန်း ဖြေ စခန်း ဟာ ပင်လယ် ရေပြင် အမြင့် ၅၅၀ မှာ တည်ရှိ ပြီး ၊ (အာစိုး ခုဂျူး အမျိုးသား ပန်း ခြံ ) အလယ် ပိုင်း သာ ယာလှပသော သဘာဝ အလှတရားတွေ နဲ့ လွှမ်းခြံ ထား ပါတယ်။ မြေပြင် မျက်...
Updated: 2017-03-24 16:11
အာခိစွတ်ခိ ရဲတိုက်မြို့ ( ဆောင်းဦးလမင်း )
ခရစ်နှစ် ၁၆၂၃ ခု နှစ် ခုရော့ဒ နာဂဆဲ ရဲ့ အမိန့် တော် နှင့် အတူ ထို မြို့ ကြီး ကို တည် ဆောက် ခဲ့ ပါတယ်။ အဲ့ ဒီ့ နောက် ပိုင် ရှင် လက် တွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြောင်းခဲ့ ပါတယ်။ ပုံ စံ က အနည်း ငယ် သေးငယ်သေ...
Updated: 2017-01-19 13:34
အရှည် ၁၁၀၀ မီ တာ ၊ ခရူး ရှူး မှာ အရှည်း ဆုံး cable car ဖြစ် ပါ တယ်။ အမြင့် ၄၄၀ မီ တာ ကျော် ကျော် ကို ၆ မိနစ် နဲ့ တောင် ထိပ် က ဘူ တာ အထိ ခုတ် မောင်း ပါတယ် ။ လမ်းခုလတ် မှာ cable car ကနေ slope car စီ ကို...
သဘာဝရှုခင်း သတင်းအချက်အလက်များရှုခင်းအတွက် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ
Updated: 2016-12-11 01:10
ပင်မအဆောက် အဦး ကို ၁၉၁၀ ခု နှစ် တွင် ( Chikuho Coal Mining Union ) ရဲ့ အစည်း အဝေး ခန်းမ အနေ နဲ့ ဆောက် လုပ် ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက် ရှိမှာ တော့ ထို မိုင်း တွင်း ကြီး ရဲ့ သမိုင်း ကို နောက် လာနောက် သား...
Updated: 2016-12-11 00:54
အွန်ဂ ရေ ပေး ဝေရေး သမိုင်းဝင် အဆောက် အဦး
2015 ခုနှစ် မှာ ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ် အနေ နဲ့ မှတ် တမ်း တင် ခြင်း ခံ ခဲ့ ရပြီး ( ဂျပန် နိုင်ငံ မဲဂျိ ခောတ် မှာ ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ စက် မှု စွမ်း အား တိုးတက်ပြောင်းလဲ ခြင်း ) အဆောက် အဦး နေရာတစ် ခ...
Updated: 2016-12-11 00:37
ဂျပန် နိုင်ငံ အိုးဟိုးရိ ပန်း ခြံ
ဂျပန် နိုင်ငံ အိုးဟိုးရိ ပန်း ခြံ ရဲ့ နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်း အမှတ် အဖြစ် ခရိုင် သူခရိုင် သား တို့ ရဲ့ ယဉ် ကျေး မှု အမွေ အနှစ် တစ် ခု အဖြစ် လက်ခံ လာ ကာ ထို ပန်း ခြံ ကြီး ကို ၁၉၈၄ ခု နှစ် တွင် တည်ထေ...
Updated: 2016-12-09 20:34
NHKကထုတ်လွှင့် ခဲ့ တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ Gunshi Kanbei နဲ့ ပက်သတ် ပြီး တော့ တစ် နိုင် ငံ လုံး အတိုင်း အတာ နဲ့ နာ မည် ကြီး လာ တဲ့ ခုရော့ဒ ကန်း ဘဲ့ မြို့ တော် ၊ သူ့ သား ဖြစ် ပြီး တော့ ဆောက်လုပ...
Updated: 2016-11-24 23:10
ဂရော လခု အန်း ( ငါး တို့ ပျော် စံ ရာ )
ရှိ စွတ် ချော ခောတ် ရဲ့ အရှင် ဂ စိုး က တရုတ် ပြည် က နေ သင် ကြား လာ တဲ့ တောင်တန်း နဲ့ ရေမြေ တို့ အကြောင်း ကို နည်း ပညာ အနေ နဲ့ ဂျ ပန် နိုင် ငံ တွင် ပြန် လည် သင် ကြား ခဲ့ ပြီး ၊ အဲ့ ဒီ နည်း ပ ညာေ...